ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး စာကွညျ့တိုကျ ( ၅ ) ခု - Layaung
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး စာကွညျ့တိုကျ ( ၅ ) ခု
by La Yaung
Written by La Yaung
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ကမ္ဘာပေါ်မှာ စာကြည့်တိုက်များစွာရှိတဲ့ အထဲမှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စာကြည့်တိုက်ကြီး ( ၅ ) ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Royal Danish Library, Denmark, Copenhagen
တော်ဝင်ဒိန်းမတ်စာကြည့်တိုက်ကို ၁၆၄၈ တွင်ဘုရင်ဖရက်ဒရစ် ၃ မှတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၇၉၃ ခုနှစ်တွင်အများပြည်သူအတွက်ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတွင်ဒိန်းမတ်ဘာသာစကားဖြင့်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်တိုင်းနီးပါးပါရှိပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ထဲတွင် ဂူတင်ဘာ့ဂ်ကျမ်းစာ၊ အိုက်စလန်စာမူများစုဆောင်းခြင်းနှင့်နတ်သမီးပုံပြင်စာရေးဆရာ Hans Christian Anderson တို့၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများပါဝင်ပါတယ်။
စာအုပ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းပေါင်းသန်း ၃၀ ကျော်ရှိပြီးနှစ်စဉ်လူငါးသန်းကျော်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းက၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိတရုတ်စာအရေးအသားအများဆုံးစုဆောင်းထားတဲ့အာရှရှိအကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ စာကြည့်တိုက်ထဲတွင်လည်းဘီစီ ၁၆ ရာစုအထိတည်ရှိခဲ့သောအရိုး၊ ကျောက်၊ လိပ်ခွံနှင့်ပတ်သက်သောတရုတ်အက္ခရာများနှင့်တည်ရှိပြီးရှေးအကျဆုံးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောစာရွက်စာတမ်းများလည်းရှိနေပါတယ်။
National Diet Library, Tokyo, Japan
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်တိုကျိုရှိအမျိုးသားအစာအာဟာရစာကြည့်တိုက်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တို့သိမ်းပိုက်သည့်အချိန်အထိဂျပန်၌ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ပြည်သူလူထု၏သတင်းအချက်အလက်များကိုစစ်ပြီးခေတ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့် Diet စာကြည့်တိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းစာကြည့်တိုက်ဟာ ဂျပန်ခန်းမ ၂ ခန်းပါဥပဒေပြုရေးနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်နှစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးဂျပန်တွင်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်တိုင်း၏မိတ္တူများကိုလည်းကိုင်ထားပါသေးတယ်။
၁၉ ရာစုမှာနယူးယောက်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်ဟာအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းမှုများစုစည်းခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းတို့မှတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ္ဍာရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံကိုထိန်းသိမ်းထားပါသေးတယ်။ စာကြည့်တိုက်တွင်သိုလှောင်ထားသောဘဏ္ဍာများ၌ဂူတင်ဘာ့ဂ်ကျမ်းစာပါဝင်ပါတယ်။ အဓိကစာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရုပ်ရှင်၏ ‘The day after tomorrow’ ၏အရေးပါသောစိတ်ကူးယဉ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
British Library, United Kingdom, London
ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်ကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်ပါလီမန်အက်ဥပဒေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်ကစာကြည့်တိုက်သည်ဗြိတိသျှပြတိုက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Das Kapital အပြင်အော်စကာဝိုင်းနှင့်မဟတ္တမဂန္ဒီတို့ပါဝင်သော Karl Marx အပါအ၀င်သုတေသီများကိုနေရာချခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်သည်ယခုအခါလန်ဒန်စိန့်ပန်ကရက်ရှိအဆောက်အအုံသစ်တစ်ခုတွင်တည်ရှိပြီးစာကြည့်တိုက်ထဲတွင်ဂူတင်ဘာ့ဂ်ကျမ်းစာ၊ Lindisfarne ခရစ်ဝင်ကျမ်းများနှင့်လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏မှတ်စုစာအုပ်များပါရှိပါတယ်။
Oak Khae Sein – La Yaung
Source ; TOP10HQ
မှေးနအေ့လှူအဖွဈ လိုအပျတဲ့ နရောစုံ ကို လိုကျလံအလှူပေးနတေဲ့ လှငျမိုး
သူမ ဟငျးခကျြတာ ကို အောငျလ က မယုံသလိုလို နဲ့ မစားရဲဘူး လို့ ပွောလာ တဲ့ အဆိုတျော ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး
ကိုဗဈအတှကျ ရညျရှယျပွီး ဧရာဝတီဘဏျ အုပျစုမှ...
ပနျကာဖှငျ့ပွီး အိပျစကျခွငျးက ဘာဆိုးကြိုးတှပေေးတယျဆိုတာ...
ကြားသိရသမျှ Q ဝငျနသေူမြား၊ လော့ဒေါငျးကြ နသေူမြားအတှကျ...
Knowledge ကိုဗဈအတှကျ ရညျရှယျပွီး ဧရာဝတီဘဏျ အုပျစုမှ...
Knowledge ပနျကာဖှငျ့ပွီး အိပျစကျခွငျးက...
Q ဝငျနသေူမြား၊ လော့ဒေါငျးကြ နသေူမြားအတှကျ...
သငျ ဘယျလို အိမျမြိုး နဲ့ နရေမလဲဆိုတာ…
ဆနျနဲ့ ဆီတှေ ထပျမံလှူဒါနျးပေးလိုကျပွနျတဲ့ မွငျ့မွတျ